स्वच्छता उत्पादनहरूमा ग्लोब मूल्यहरू बीट ईबे खरीद गर्नुहोस् - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र बी2बी मार्केटप्लेस समाचार
स्वच्छता उत्पादनहरूमा ग्लोब मूल्यहरू बीट ईबे खरीद गर्नुहोस्
सम्पादकको पिक जनवरी 14, 2021 जनवरी 14, 2021 थोक र B2B समीक्षा अर्जेन्टिना थोक र B2B, एशिया थोक र B2B, B2B, बंगलादेश थोक र B2B, बेल्जियम थोक र B2B, ब्लग, बेलायत थोक र B2B, बुल्गारिया थोक र B2B, व्यापार, क्यानाडा थोक र B2B, चीन थोक र B2B, चेकोस्लोवाकिया थोक र B2B, डेनमार्क थोक र B2B, DR कांगो थोक र B2B, सम्पादकको पिक, इजिप्ट थोक - B2B, फ्रान्स थोक - B2B, जर्मनी थोक र B2B, ग्लोबल थोक अनलाइन, ग्लोबल विश्व, ग्रीस थोक र B2B, ह Hongक Kong थोक र B2B, हंगेरी थोक र B2B, भारत थोक र B2B, इन्डोनेशिया थोक र B2B, इटाली पसल थोक र B2B, जापान थोक र B2B, केन्या शप ग्लोबल, मेक्सिको थोक र B2B, नाइजेरिया थोक - B2B, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, पाकिस्तान थोक र B2B, फिलिपिन्स थोक र B2B, रूस थोक र B2B, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, दक्षिण अफ्रीका थोक - B2B, दक्षिण कोरिया थोक र B2B, स्पेन थोक र B2B, थाईल्याण्ड थोक र B2B, टर्की थोक र B2B, युक्रेन थोक र B2B, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
एक महिना अघि, हामी ग्लोब किन्नुहोस् कसरी ग्राहक र खुद्रा विक्रेताहरू लोकप्रिय नयाँ ब्रान्ड नाम उत्पादनहरू किन्न सक्छन्, हाम्रो नयाँ विक्रेता मार्फत देखाए, थोक B2B, तिनीहरूको पसलमा बेच्नको लागि र तपाईंको। हामीले दिएका उदाहरणहरू स्वच्छता उत्पादनहरू थिए। एउटा अनुगमनको रूपमा, हामीले यो देखाउने निर्णय ग्यौं कि हाम्रो मूल्यहरू प्रतिस्पर्धासँग कसरी तुलना गरिन्छ, र विशेष रूपमा eBay।
द ग्लोब शपमा, Ial..7.5 औज बोतल डायल एलो एन्टिब्याक्टेरियल तरल हात साबुन प्रत्येक $ १.1.39। को लागी उपलब्ध छन्। हामीसँग पनि छ 20-गणना Wet Ones Wipes को प्याक $ १.१1.15 को लागी। लोकप्रिय मागको कारण, हाम्रा धेरैजसो स्वच्छता वस्तुहरू द्रुत गतिमा भइरहेका छन्। तर, तर्कका लागि, जारी राखौं।
ग्लोब प्रदान गर्दछ चेपस्टिक लिप बामको २--टुक्रा पालहरू- यहाँ अमेरिकामा जाडो छ, सबै पछि $ २..26.60० को लागि। अर्को वस्तु, जहिले मागको हुन्छ, हुन्छन् Vaseline पेट्रोलियम जेलीको 3.75। कन्टेनरहरू $ १.1.39। को लागि। सधैं जस्तो, ब्राण्ड नाममा नयाँ र आश्चर्यजनक सम्झौताहरू, अमेरिकी उत्पादनहरू, विभिन्न प्रकारका कोटीहरूमा आउँदछ, त्यसैले शप द ग्लोबमा प्राय जाँच गर्नुहोस्!
त्यसो भए, ती समान वस्तुहरू eBay मा के जान्छन्? ठीक छ, यसलाई सफासँग भन्नुको लागि, ग्लोब शप सफा गर्नुहोस्।
चेपस्टिक तम्बू eBay— मा। 49.99 को लागि सूचीबद्ध छ ग्लोब शपमा भन्दा %१% बढी. गीला ओन्स ट्राभल प्याकहरू ईबेमा $ $.——— को लागि उपलब्ध छन् eBay ग्लोब शपमा तीन गुणा मूल्य भन्दा बढी छ. भ्यासलीनको उही कन्टेनर eBay— मा $ 5.76 मा सूचीबद्ध छ eBay ग्लोब शपमा चार गुणा बढी लागत छ। EBay मा, डायल हात साबुन को बोतल $ 7.99— को लागि बेच्छ eBay ग्लोब शप भन्दा लगभग छ गुणा बढी छ!
हामी कसरी त्यस्ता कम मूल्यमा यस्तै उच्च माग, नाम ब्रान्ड उत्पादनहरू बेच्न सक्षम छौं? यहाँ फेरि, पसल ग्लोब सफा आयो। हामीले महँगो र अनावश्यक बिचौलियों हटाएका छौं। हामी विक्रेताहरूलाई हाम्रो वेबसाइटमा समाचार प्रकाशन र सूचिहरू पोष्ट गर्न अनुमति दिन्छौं, कुनै पनी अगाडि, जेब लागतको। बदलामा, द ग्लोब शपले विक्रेताहरूलाई केवल उनीहरूले बेचनेको मात्र १२% चार्ज गर्दछ।
हामी सञ्चालन गर्दछौं १०० भन्दा बढी प्रमुख भाषाहरू, र प्रस्ताव मुद्राको एक विस्तृत विविधता, तपाईं प्रत्येक हुन सक्ने भाषा, तपाईं प्रत्येकले बुझ्ने भाषामा सामान र पूँजीको सजिलो प्रवाह सुनिश्चित गर्दै। दुबै बढीहरू बाटोमा छन्।
एक स्थापित समाचार कम्पनीको स्वामित्वमा छ, ग्लोब शप हाम्रो तेस्रो साइट हो, साथै फ्रीलान्स ग्लोबल गिग, र अभिभावक साइट, सांप्रदायिक समाचार। सबै तीन साइटहरूले द्रुत बृद्धि प्रदर्शन गरीरहेका छन् र उनीहरूलाई ग्लोबल प्लेटफार्मको रूपमा स्थापित गर्दछ जुन हाम्रा विक्रेताहरूलाई कुनै वा कम मूल्यमा हुँदैन।
सामुदायिक समाचारले उद्योगहरू र बजारहरू, उत्पादनहरू र सेवाहरू मार्फत अप-टु-डेट रिपोर्टहरू र पूर्वानुमान प्रदान गर्दछ। हामी पाठकहरूलाई दैनिक समाचार, ब्यापार, खेलकुद, र विषयहरूको विस्तृत श्रृंखला विश्लेषण प्रदान गर्दछौं।
जो कोहीले हाम्रो लक्षित लेखहरू सांप्रदायिक समाचारहरूमा पढ्न सक्छन्, गुगल समाचारवा फेसबुक समाचार। हाम्रो साइट को बारे मा अधिक जानकारी को लागी, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
एक साधारण साइन-अप प्रक्रिया र न्यूनतम सेटअपको साथ, द ग्लोब शपले व्यावसायलाई व्यावहारिक रूपमा कुनै समयको लागि अप र चलाउनको लागि अनुमति दिन्छ।
ग्लोब शप गर्न दिनुहोस् तपाईंको स्टोरफ्रन्ट्सलाई उच्च माग, ब्रान्ड नाम, अमेरिकी उत्पादनहरू भर र यो अप्रत्याशित वर्षको मोडमा भरपर्दछ। आज यसलाई प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्! ग्लोबको ग्लोबल थोक विक्रेता दर्ता खरीद गर्नुहोस् नि: शुल्क छ।
थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस् चेपस्टिक तम्बू सांप्रदायिक समाचार हात साबुन डायल गर्नुहोस् थोक अनलाइन बेच्नुहोस् ग्लोब किन्नुहोस् Vaseline भिजेको
थोक र B2B समीक्षा
हामी व्यापारीहरूलाई हरेक प्रमुख भाषा, खुला देश र विश्व मा शहर मा एक पोष्टिंग प्रदान गर्दछौं। त्यसोभए लगभग एकै पल्टमा तपाइँको स्थानीय व्यापारी उत्पादनहरु गर्न सक्छन् र भोल्युम खरीद को लागी विश्वव्यापी देखीनेछ। को ग्लोब किन्नुहोस् लक्षित बजार एकदम छिटो बढिरहेको अनलाइन स्टोर हो जसलाई अनौंठो सामानहरूको निरन्तर आपूर्ति आवश्यक पर्दछ। हामी सोध्छौं कि केवल व्यापारिहरू जोसँग व्यापार गर्न सक्षम छन् र अन्य देशहरू र व्यवसायहरूमा पठाउँछन्।
आईआरएस आगामी कर सिजनका लागि तयार छ - कर कानूनमा अन्तिम मिनेट परिवर्तन आईआरएस फारम र निर्देशनहरूमा समावेश छ।
तपाइँको ग्यारेजलाई कसरी सानो कार्यशालामा रूपान्तरण गर्ने